Uterqüe dia manolotra an'i A la Fresca, tranony mpanonta vaovao SS21 | Bezzia
Maria vazquez | 07/04/2021 18:00 | Inona no hotafiko
Vao tsy ela akory izay i Uterqüe dia nanolotra «A la Fresca», famoahana lahatsoratra vaovao izay misy ny tolo-kevitr'ilay orinasa ho an'ity vanim-potoana lohataona-fahavaratra 2021 vao natombotsika ity. Tolo-kevitra manana toetra manokana samy hafa izay maneho finiavana sy fanantenana.
Ny tints futuristic sy ny fampahatsiahivana ny fitopololahy dia niangona tamin'ity fanontana vaovao ity izay ankasitrahanay hatramin'ny fironana telo. Ny voalohany dia mampiasa mainty sy fotsy ho an'ny endrika sy ny antsipiriany momba ny organika. Ny faharoa dia manolo-tena amin'ny famoronana sy ny fikajiana geometrika. Ary ny fahatelo?
1 Mainty sy fotsy
2 Sary amin'ny sary
3 Fametahana loko sy lamina
Ny fifangaroan'ny lamba sy ny antsipiriany amboradara entanin'ny endrika voajanahary voajanahary kintana amin'ny akanjo mainty sy fotsy amin'ny trano fanontana vaovao. Ao Bezzia no tena tianay ny fampifangaroana ny akanjo hoditra misy eyelet sy ilay lobaka vita amboradara. Saingy tsy azontsika atao koa ny tsy milaza ireo akanjo, noho ny amboradara manaitra azy ireo.
Sary amin'ny sary
Ny fanaovana pirinty dia tsy mahamarika eo amin'ireo tolo-kevitr'i Uterqüe vaovao. Na dia tsy tokony hiresaka momba ny pirinty ihany aza isika, satria mahita printy miloko roa mahazatra ihany koa eo amin'ireo tolo-kevitra: ny houndstooth. Ireo roa ireo dia atambatra amin'ny alàlan'ny akanjo lava sy blouse poplin, lobaka landihazo ary akanjo ba ba nataony ... Ary izany rehetra izany amin'ny loko maitso, manga sy lilac tsara tarehy.
Fametahana loko sy lamina
Ny fahaiza-mamorona sy ny fanantenana dia mampiavaka ny endrika feno fahasahiana indrindra amin'ny trano fanontana A la Fresca. Na dia vitsy aza, zig zag pirinty amin'ny loko mamirapiratra aza lasa tsy voamariky ny olona. Na dia kely aza rehefa atambatra amin'ny tsipika izy ireo mba hamoronana akanjo mety amin'ny vehivavy tapa-kevitra sy matoky tena ihany.
Ireo akanjo izay kintana amin'ity famoahana lahatsoratra ity dia efa tafiditra ao amin'ny katalaogin'i Uterqüe ary ireo izay tsy hanao izany atsy ho atsy. Ka raha efa nijerijery akanjo ianao dia aza mieritreritra be loatra sao dia avela tsy hanana azy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Uterqüe dia manolotra an'i A la Fresca, trano fanontana vaovao SS21